Qor Wixii Date My Butros
Ku biir koox weyn tabarucaadka.
Waxaan mar walba u oggolaaday in articles weyn ka qorayaasha, mareeg, waxa ayna qorayaasha madaxbanaan. Wixii fikrad ah waxa aynu ku raadinayso, fadlan akhri iyada oo qaar ka mid ah qoraalada ku saabsan goobta. Tani waxay sidoo kale ku siin doona fikrad ah noo midab iyo nooca articles in ay si fiican uga soo shaqeeyay dhagaystayaasheenna.
Qaar ka mid ah warbixin guud oo:
Our go'aan ku daabacaadan article waxay ku salaysan tahay mudnaan iyo haboonaanta ee qodob kasta si gaar ah.
Haddii aan ku heshiiyaan in ay daabacaan aad article ugu horeeyay, ka dibna warqad heshiiska la saxiixi doonaa ka hor inta aan lacag la sameeyo heerka hadda for article kasta. Tani ma noqon doonaan heshiis si gudbiyeen oo ku xiga waxaa lagu soo daabici doonaa. All soo gudbiyeen oo ku xiga ee la daabaco lagu wuxuu ku saleysnaan doonaa mudnaan iyo haboonaanta ee qodob kasta si gaar ah.
Dhagaystayaasha Our target Maraykanka ka weyn tahay 18 dadka waaweyn hal.
Iyadoo yar ka reeban, articles waa dhexeeya noqon 600-1000 erayada.
Titles of content in ay si fiican uga soo shaqeeyay waa tusmada xoog, lambarrada (tusaale liistada) iyo su'aalo.
Dhammaan waxyaalaha ay soo gudbiyeen article Waa inay noqotaa asal iyo marnaba la daabacay ka hor inta.
Qorayaasha dooran karaan in ay qorayaasha muuqasho ama leeyihiin profile daabacay on goobta.
Si aad u soo gudbiso maqaal loogu tixgeliyo, fadlan email maqaalka si:
soo gudbinta AT datemypet.com
FIIRO GAAR AH: Qoraallada ka hay'ad ama ganacsiga ganacsiga ayaa la qiimeyn doonaa aan bixiyo sal u